Ogaden News Agency (ONA) – Labo Milyan oo Qaxooti Itoobiyaan Ah oo Sudan Si Sharci Darro Ah Ku Jooga.
Labo Milyan oo Qaxooti Itoobiyaan Ah oo Sudan Si Sharci Darro Ah Ku Jooga.
Masuul sare oo kamid ah Ciidanka Amaanka wadanka Sudan ayaa shaaca kaqaaday ineey labo milyan oo qaxooti Itoobiyaan ah ay si sharci darro ah ugu nool yihiin wadanka Sudan.
Lt. Gen. Abdulraxiim Maxamad Xuseen oo saxaafada lahadlay ayaa sheegay ineey qaaxootiga Itoobiyaanka ah ee Sudan kusoo qulqulaya ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan nolosha shacabka ree Sudan. Dhibaatooyinkaas oo isugu jira kuwo bulsho, dhaqaale & nabad galiyo.
Qaxootigan ayaa dhibaatooyin badan oo kaga yimid qaab nololeedkii ay wadankoodii hooyo ugu noolaan lahaayeen awgood uga qaxay wadanka dibadiisa. Taliska Gumaysiga Itoobiya ayaa cadaadis & cabudhin badan ku haya shacabka Itoobiya. Arintan & kuwo kaloo la xidhiidha ayaa horseeday ineey iskaga qaxaan wadankooda.
Macaluusha & abaaraha aan kala joogsiga lahayn ee Itoobiya kuhabsaday ayaa iyaduna saamayn wayn ku yeeshay ineey dhalinyaro badan u kala qaxaan wadamada dariska la ah Itoobiya.
Waxaa maalin kasta laga soo qabqabtaa qaxooti Itoobiyaan ah wadama dariska ah. Wadamadii ugu dambeeyay ee qaxootiga Itoobiya dib usoo celiyay waxaa kamid ah Zaambiya & Malaawi oo todobaadkan boqolaal Itoobiyaan ah.